MVRK: Ny fanombohana ny hetsika virtoaly 3D | Martech Zone
Alatsinainy, May 18, 2020 Alatsinainy, May 18, 2020 Douglas Karr
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nasaina hanao fitsidihako voalohany an fihaonambe virtoaly an-tserasera toerana. Raha ny marina, na dia nilalao aza ny fotoana fanidiana ary nieritreritra aho fa mety ho fitaovana tsara io, dia niahiahy aho fa mety somary kely ihany koa geeky ary mety tsy mahasarika orinasa lehibe. Nieritreritra aho fa mety hitovy amin'ny filalaovana lalao video izany fa tsy amin'ny tena ao anaty tontolon'ny fandrosoana.
Na izany aza, ny fitsidihan'ny mpampiasa nanasa ahy dia tena nahagaga ahy sy nanantena ny amin'izay zavatra niainany:
Fanamoriana tena - Afaka namakivaky ny habakabaka aho, nandinika horonantsary na fampisehoana ary nifandray tamin'ny olona manokana.
1: 1 Resadresaka - Afaka nanomboka sy nifandray tamin'ny olona tao amin'ny efitrano virtoaly izay nitrangan'ny resadresaka sy fampisehoana teo aminay aho fa tsy olon-kafa.
Traikefa manitrika - Ny traikefa amin'ny ankapobeny dia tsy toy ny lalao video mihitsy, tsy nisy ezaka ary nalain'ny mpampiasa izy io. Afaka nahita olona iray tsy dia nahafehy tena ara-teknika nankafy azy aho.
Paositra Lockdown - Hitako tanteraka ny lalana azon'ny orinasa anaovana hetsika mivantana sy hetsika virtoaly iray miaraka amin'ity haitao ity.
Mpilalao iray amin'ity tsena ity dia MVRK, izay mitondra Vx360 eny an-tsena. Ny sehatra dia mamorona tontolo voaorina namboarina izay manova ny tranonkala ho lasa fiainana traikefa virtoaly izay manitatra ny fahitana sy ny analytics tsy mbola nisy toy izany.
Amin'ny fampiasana Vx360, ny MVRK dia mamolavola tontolo iainana marika manokana izay mahatonga ny traikefa an-tserasera ho toy ny toerana tena misy amin'ny alàlan'ny sary sy ny endrika avo lenta miaraka amin'ny fikarohana 360-degre sy ny fivezivezena amin'ny hetsika toy ny fiainana. Ireo mpitsidika sy mpanatrika dia mivezivezy manodidina ny tontolo virtoaly amin'ny alàlan'ny birao na fitaovana finday, miaina efitrano, fifandraisana ary maro hafa.
Ny valan'ny MVRK Vx360 dia manankarena amin'ny fizahan-tany sy ny fahafaha-miditra amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tranomboky misy endri-javatra fototra izay azo ampanjifaina manokana amin'ny filàna manokana sy ny fandraisana andraikitra:
Votoatin'ny Video-On-Demand (VOD) azo ampifandraisana
Fahafahana mivantana mivantana
Fampidirana fifandraisana roa-lalana
Fanaraha-maso ny fanitarana
WebXR sy fampiharana hafa mifangaro
Ny fotoana ahafahan'ny marika sy ny indostria isan-karazany mampihatra an'io traikefa manitrika vaovao io dia tsy misy fetra. Manitatra mihoatra ny fihaonambe amin'ireo karazana marika sy IP hafa, toy ny:
Raiso amin'ny ambaratonga manaraka ny fialamboly - Ny marika amin'ny indostria toy ny serivisy streaming, ny sarimihetsika ary ny famoahana dia afaka manandratra ny fomba ahitan'ny olona ny endri-tsoratra sy ny tsipika amin'ny alalàn'ny mpankafy lalindalina kokoa amin'ny tontolo tiany ary mamela azy ireo hitsidika matetika araka izay itiavany azy ireo, rehefa maniry izy ireo. Ny fanentanana ho an'ny vanim-potoana na votoaty vaovao dia nanitatra ny fihoarana ivelan'ny pop-up ara-batana nentim-paharazana hamela rehetra mpankafy hirotsaka.
Omeo ny fandrosoana vokatra mbola tsy nisy toy izany - Ny fampidirana singa iray anaty tranonkala amin'ny famoahana vokatra vaovao dia midika hoe mihoatra ny tranonkala mifameno. Ny famoronana ho an'ny activation dia tsy misy fetrany miaraka amin'ny tontolo noforonina Vx360 ary ny mpampiasa dia mahazo traikefa marika avo lenta miaraka amin'ny tolotra azo tsapain-tanana.
Hanova hetsika sy kaonferansa manokana - Miaraka amin'ny fetra vaovao mifandraika amin'ny olona, ​​ny marika dia afaka mamindra trano heva mahaliana, fampirantiana na traikefa amin'ny hetsika amin'ny tontolon'ny nomerika ahafahan'ny mpanatrika mandehandeha toerana malalaka misy atiny premium tsy hay hadinoina sy ifanakalozana avy amin'ireo mpanohana sy mpiara-miasa marika. Ny sehatra dia azo ampifandraisina amin'ny hetsika manokana hanamafisana ny fahatongavan'izao tontolo izao.
Ity no taranaka fanandramana marika manan-danja manaraka; fenitra vaovao tsy misy fetra. Ny teknolojia dia fandrosoana azontsika tamin'ny asa talohan'ny tetezamita tsy ampoizina sy takian'izao tontolo izao ho an'ny traikefa nomerika sy virtoaly. Izy io dia mifandraika indrindra ankehitriny, ary mino izahay fa revolisionera amin'ny fivoaran'ny marika sy ny fifandraisany satria mamela azy ireo hanolotra bebe kokoa - famoronana bebe kokoa, zava-baovao, traikefa bebe kokoa. Izy io dia mamorona teboka mavitrika maro hanentanana ny mpankafy efa misy sy mety ho lasa marika amin'ny hetsika virtoaly, kaonferansa, fampandehanana ary fampirantiana.
Steve Alexander, mpanorina ary Chief Officer Experiential an'ny MVRK
Liana hahita hoe inona ny traikefa Vx360?
Tags: hetsikamvrkhetsika virtoalyvx360